funny Archives - Barnyar Barnyar
May 25, 2022 linn htet 0
ကတိပေးပြီးလျှင် မဖျက်ပါနှင့်… တခါတုန်းက,,, ဘုရင်ကြီးတပါးမှာ… ရွှေရင်ထွားထွားနဲ့ ဘုရင့်သမီးတော်တပါး ရှိတယ်… နဂါးကိုနှိမ်နင်းနိုင်လို့ သူရဲကောင်းဖြစ်နေတဲ့ ဌေးအောင် ဆိုသူက ဘုရင့်သမီးရဲ့ရွှေရင်သိမ်းသစ်ကို စွဲလန်းနေမိတယ်။ သွားကိုင်ကြည့်ချင်တဲ့ သူ့ဆန္ဒကို အကောင်အထည် ဖော်ရင် သေဒဏ်ပေးခံရမှာ သိပေမယ့် မကြံစည်ဘဲလည်း မနေနိုင်ဘူး။ တရက် သူငယ်ချင်း ဒေါက်တာချက်ကြီး ကို […]
” လာထားကြက်တကောင် ” “အဟင့် ဟင့် မြို့ကြီးသားတွေ မတရားဘူး…”
” လာထားကြက်တကောင် ” “အဟင့် ဟင့် မြို့ကြီးသားတွေ မတရားဘူး…” တခါ တုန်းက တိုင်းပြည်တပြည်မှာ ဘုရင်ကြီးက အမတ်ကြီးကို မေးတယ် … ” အမတ်ကြီး မိန်းမကြောက်တဲ့ သူတွေဟာ ဘာနဲ့ တူသလဲ ” အမတ်ကြီးကလဲ ပြန်ဖြေတယ် ။ ” […]
ကိုယ့်ချစ်သူကို အချစ်စမ်းချင်ရင် စမ်းသပ်လို့ရတဲ့နည်းလမ်းများ…
ကိုယ့်ချစ်သူကို အချစ်စမ်းချင်ရင် စမ်းသပ်လို့ရတဲ့နည်းလမ်းများ… (၁) မျက်ခွက်ကို လက်ဝါးနဲ့ ၁၄ ချက်လောက် ဘယ်ပြန် ညာပြန် ဆင့်တွယ်ကြည့်ပါ။ အား ပါ-ပါစေ… တစ်ချက်ကလေးမှတောင် ဒေါသ မထွက်ဘူးဆိုရင် သေချာတယ်… အဲ့ဒီ့ ယောက်ျားလေး အချစ်က အချစ်စစ် အချစ်မှန်🧡… (၂) နှာနုရိုးတည့်တည့် လက်သီးနဲ့ […]
ခိုးရာလိုက်သွားတဲ့ သမီးဖြစ်သူရဲ့စာကိုဖက်ပီး ခွီးနေရတာ အူပါတက်ရော
ခိုးရာလိုက်သွားတဲ့ သမီးဖြစ်သူရဲ့စာကိုဖက်ပီး ခွီးနေရတာ အူပါတက်ရော သို့ / ချစ်ရပါသော အမေနဲ့ အဖေ သမီး ခိုးရာနောက် လိုက်သွားပါပြီ။ သမီးကို အဖေနဲ့ အမေတို့ ပြုစုနေရမှာ ရှက်ပြီတော့ အားနာလာလို့ပါ။ အမေတို့ ဆင်ပေးထားတဲ့ လက်စွပ် ဆွဲကြှိုး လက်ကောက်တွေကို မယူချင်လို့ အိတ်နဲ့ထည့်ပြီး […]
May 12, 2022 thanzin laypyay 0
ညီမစိတ်တွေ ထိန်းလိုမရတော့လို့ပါ အကိုရယ် သာအောင်က ဆိုင်ကယ် တက္ကစီ မောင်းသမားပေါ့။ လူပျို ကြီး တစ်ကိုယ်တည်းသမား။ တစ်ရက် တွက်ခြေမကိုက်သေးတော့ မိုးချုပ်တဲ့အထိ ဆွဲနေတာ။ ည ၁၁ နာရီလောက် ခရီးသည် ကောင်လေး တစ်ယောက်ကို သွားပို့ပေးရတယ်။ သွားတဲ့လမ်းက ချောင်ကျကျပဲ၊ သွားနေရင်း လမ်းတစ်ဝက်အရောက် […]
May 8, 2022 linn htet 0
တော်သေးတာပေါ့ မျိုးကြီး ကယ်ပေလို့ ရွာထဲက မိဇင်မိသားစုနဲ့ ဖိုးအောင်တို့မိသားစုက ပြိုင်ဘက် တနည်းအားဖြင့် ရန်ဘက်တွေပေါ့… ခက်တာက အချစ်မှာ မျက်စိမပါဘူး ဆိုတဲ့စကားလိုပဲ ဖိုးအောင် ‌နဲ့ မိဇင်က ချစ်သူတွေ ဖြစ်ကြတယ် ၂ဖက်စလုံးက သဘောမတူလို့ အမျိုးမျိုး ဖျက်ကြပေမယ့် သူတို့အချစ်က ခိုင်မြဲနေဆဲပဲ… တနေ့ […]
ဂျာမန်နိုင်ငံသားကို ရှင်းပြနေတဲ့ မြန်မာဂိုက်လေး ချွေးပြန်သွားအောင်စဉ်းစားလိုက်ရတဲ့ မေးခွန်းလေး
Zawgyiဖြင့်ဖတ်ရန် မြန်မာနိုင်ငံသို့ အလည်အပါတ် ရောက်ရှိနေသော ဂျာမန်လူမျိုးသည် ၄င်း၏ ဂိုက်လေးအား မေးမြန်းနေသည် ဂျာမန် ။ ။ ဒီအဆောက်အဦးလေးကို ဘယ်လို ခေါ်သလဲ? ဂိုက် ။ ။ ဇရပ်လို့ ခေါ်ပါတယ် ” ဂျာမန် ။ ။ ဘာရည်ရွယ်ချက်နဲ့ လမ်းဘေးမှာ […]
သူ့နာမည်က ဒေါက်တာ ဘာမီတွန်
သူ့နာမည်က ဒေါက်တာ ဘာမီတွန် နယ်မြို့သေးသေးလေးတွေမှာ… ရမ်းကုတွေ ခေတ်ကောင်းစဉ်ကပေါ့ ရမ်းကုတယောက်ကတော့ တော်တော် နာမည်ကြီးတယ်… ကြီးရတဲ့ အကြောင်းရင်းကလည်း ဘာရောဂါပဲဖြစ်ဖြစ် သူပေးတဲ့ ဆေးကတော့.. ဘာမီတွန်ပဲ အာ့ကြောင့် နာမည်အရင်းတောင် ပျောက်ပြီး အားလုံး သိကြတာကတော့ သူ့နာမည် ဒေါက်တာဘာမီတွန် တနေ့တော့ .. မြို့ကြီးကနေ […]
April 27, 2022 linn htet 0
ဖြေးဖြေးမောင်းပါ ဒရိုင်ဘာရယ်…. သီတာ ရင်တွေ တုန်လွန်းလို့ပါ ဆရာတော် ဦးနန္ဒိမာ မြစ်ကြီးနားကနေ မုံရွာ – မန္တလေးဘက် ခရီးသွားစရာ ရှိ၍ ကားလက်မှတ် ဖြတ်ထားခဲ့သည်။ ဘုန်းကံအရှိန်အဝါပဲ နည်းလို့လား၊ တိုက်ဆိုင်မှုကြောင့်လား မပြောတတ်။ ဆရာတော် ခရီးသွားတိုင်း ရှေ့ဆုံးခုံတန်း မရတတ်။ တစ်ဆယ်နောက်က ထိုင်ခုံသာ […]
April 11, 2022 linn htet 0
တညလုံး ဖဲရိုက် ပြန်လာတာတောင် အိမ်က မိန်းမက ထိုင်ရှိခိုးရတဲ့ မောင်ခွေးရဲ့ အကြံ အကြံပိုင်သော မောင်ခွေး ည ၉ နာရီလောက် လင်မယား၂ ယောက် အိမ်ပြန်ကြတော့ လမ်းတစ်ဝက်မှာ မျက်နှာဖုံးစွတ်နဲ့ လူ ၄ယောက် ထွက်လာ ပါတယ်… ဓါးကိုယ်စီ ကိုင်ထားပြီးတော့.. ခေါင်းဆောင်ဖြစ်သူလို့ […]